बाइबलले गर्भपातको बारेमा के भन्दछ?
प्रश्न: बाइबलले गर्भपातको बारेमा के भन्दछ?
उत्तर: बाइबलले गर्भपात वा भ्रूण हत्याको विषयलाई विशेष रूपले कहिल्यै पनि सम्बोधित गरेको छैन। तर पनि, पवित्र शास्त्रमा असंख्या शिक्षाहरु दिएको छ जसले यस विषयलाई बहुतायतको साथ स्पष्ट गर्छ कि परमेश्वर गर्भपातलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नु हुन्छ। यर्मिया 1:5 ले हामीलाई भन्दछ कि परमेश्वर हामीलाई गर्भमा रच्न भन्दा पहिले देखिनैनै जान्नु हुन्छ। भजन संग्रह 139:13-16 परमेश्वर द्वारा हाम्रो सृष्टि र गर्भमा हाम्रो निर्माणको लागि सक्रिय भूमिकाको बारेमा बोल्दछ। प्रस्थान 21:22-25 ले यसको लागि यस्तो भन्छ जस्तो एउटा व्यक्ति कसैको पनि हत्या गर्दछ उसको लागि त्यहि सजाय हुन्छ जुन कोहि लाई हत्याको लागि ठहराईएको छ –अर्थात् मृत्युदण्ड –को विवरण दिन्छ, जुन एउटा शिशुको गर्भमा नै हत्या गर्नुको कारण बन्छ। यो स्पष्ट रूपले संकेत दिन्छ कि परमेश्वर गर्भमा रहेको एउटा शिशुको पूर्ण विकसित मनुष्यको रूपमा नै मन्निन्छ । विश्वासीहरूको लागि, गर्भपातको चुनाव गर्नु स्त्रिहरुको अधिकारको विषय मात्र होइनन। यो एउटा मानव प्राणी जुन कि परमेश्वरको स्परूपमा रचिएको छ, जुन जीवन र मृत्युको विषय हो (उत्पत्ति 1:26-27; 9:6)।
“पहलो तर्क जुन सदैव गर्भपातको प्रति ख्रीष्टिय दृष्टिकोणको विरूद्ध खडा हुन्छ?" जति भयानक बलात्कांर र/वा कौटुंबिक व्यभिचारको परिणामस्वरूप गर्भवती बन्दछन त्यतिनै एउटा एउटा शिशु को हत्या यसको उत्तर हो? दुई गलतिहरु एउटा कुरालाई सहि गर्दैनन। त्यो बच्चा जुन बलात्कार/कौटुंबिक व्यभिचारको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुन्छ, लाई कुनै यस्तो प्रेमी परिवारलाई पाल्न दिन सकिन्छ जसले स्वयं आफैले बच्चा पाउनमा असमर्थ छन, वा बच्चाको आमा स्वयंले पालन-पोषण गर्नु सक्छिन। फेरी पनि शिशु त निर्दोष छ र त्यसो उसको पितासँगको खराब कार्यहरुको लागि दण्ड दिनु हुदैन।
दोस्रो तर्क जुन अक्सर गर्भपातको प्रति ख्रीष्टीय दृष्टिकोणको विरूद्ध खड़ा हुन्छ, त्यो यो हो कि "त्यो समय के गर्नु पर्छ जब एउटा माताको जीवन नै खतरामा हुन्छ?" ईमानदारीले भने भने यो गर्भपातको विषयमा उत्तर दिनको लागि एउटा कठिन प्रश्न हो। सबै भन्दा पहिले, आउनुहोस् स्मरण राखौं कि यस्तो परिस्थितिको पछि दस मध्य केवल एउटा प्रतिशत नै गर्भपातको कारण आजको संसारमा हुन्छ। आफ्नो जीवनहरुलाई बचाउनको अपेक्षा अहिले सम्म स्त्रियहरुले आफ्नो सुविधाको लागि धेरै जसो गर्भपात गरेका छन। दोस्रो, आउनुहोस् स्मरण राखौं कि परमेश्वर आश्चार्यक्रमहरुको परमेश्वर हो। उहाँले माता र एउटा बच्चाको जीवनलाई उनीहरुको विरूद्ध सबै किसिमको मेडीकल बाधाहरुको विपरीत पनि संभालनु सक्नुहुन्छ। अन्तमा, जब कि, यस प्रश्नलाई केवल पति र पत्नी र परमेश्वरको मध्यमा निर्धारत गर्नु सकिन्छ। कुनै पनि दम्पति जुन धेरै अधिक विकट परिस्थितिलाई सामना गरि रहेका छन्, लाई प्रभुसँग बुद्धिको लागि प्रार्थना गर्नु पर्छ (याकूब 1:5), कि उनीहरुले के गर्नु पर्छ।
आजको समयमा लगभग 95 प्रतिशत गर्भपातमा स्त्रीहरु केवल यसकारण सम्मिलित हुन्छन किनकी उनीहरु केवल एउटा शिशु चाहदैनन्। लगभग5प्रतिशत भन्दा कम गर्भपात बलात्कार, कौटुंबिक व्यभिचार वा माताको जीवन खतरामा हुनुको कारणले गर्छन। यहाँ sमम कि5प्रतिशत सबै भन्दा कठिन उदाहरणहरुमा पनि, गर्भपात नै सबै भन्दा पहिलो विकल्प हुनु हुदैन। एउटा गर्भमा एउटा मानव प्राणीको जीवन योग्यता राख्नको कारण हरेक संभव कोशिशद्वारा जन्म लिनको लागि अनुमति दिनु पर्छ।
तिनीहरु जसले गर्भपात गरेका छन्, उनीहरुले यो स्मरण राख्नु पर्छ कि गर्भपातको पाप कुनै अन्य पाप भन्दा कम क्षमा गरिने योग्य होइन। ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा, सबै पापहरुलाई क्षमा गर्न सकिन्छ (यूहन्ना 3:16; रोमी 8:1; कलस्सी 1:14)। एउटा स्त्री जसले गर्भपात गरेको छ, एउटा पुरूष जसले गर्भपातको लागि उत्साहित गरेको छ, वा यहाँ सम्म कि एउटा डॉक्टर जसले यो गर्नलाई सहायता गरेको छ– सबैले येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा क्षमा पाउन सक्छन।